တခါတုန်းက ကြွက်တစ်ကောင်ဟာ နံရံတစ်ခုရဲ့ အကွဲကြောင်းကို ဖြတ်သန်းပြီး လယ်သမား နဲ့ သူ့ဇနီး အထုပ် တစ်ထုပ်ဖြည်နေတာကို ချောင်းကြည့်နေခဲ့တယ် ။ “ ဒီအထုပ်ထဲမှာ ဘာစားစရာတွေများ ပါမှာပါလိမ့် ” ကြွက် ဟာ သိချင်စိတ်တွေပြင်းပြနေခဲ့တယ် ။ သူဟာ အထုပ်ကို အသေအချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ အဲဒါဟာ ကြွက်ထောင်ချောက်တစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက် အလွန်ကို စိတ်ဓါတ်ကျသွားခဲ့ရတယ် ။
ဒါနဲ့ ကြွက်ဟာ ခြံဝိုင်းထဲ ပြန်လာပြီး အသံကျယ်ကျယ်နဲ့အော်ပြောလိုက်တယ် ။ “ အိမ်ထဲမှာ ကြွက်ထောင်ချောက် တစ်ခု ရှိတယ် -- အိမ်ထဲ မှာ ကြွက်ထောင်ချောက်တစ်ခုရှိတယ် !! ”
အဲဒီအခါ ကြက်ဖ က ကတော်ကတော်ဆိုပြီးအ သံပေးပြီး မြေကြီးကို ဒေါသတကြီး ခြစ်ကုတ်လို့ ဦးခေါင်း ကို မော့ပြီး ပြောလိုက်တယ် ။ “ ဒီမယ် မောင်ကြွက် ဒါဟာ မင်းနဲ့ပဲ ဆိုင်တဲ့ အရေးကြီးအကြောင်းအရာဖြစ်တယ် ငါတို့နဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ပါဘူး ဒါကြောင့် မင်းဘာသာ ငြိမ်ငြိမ်နေရင်ကောင်းမယ် ”
ကြွက်ဟာ ဒီလိုနဲ့ ၀က်ဆီကိုရောက်သွားပြီးပြောတယ် ။ “ အိမ်ထဲမှာ ကြွက်ထောင်ချောက်တစ်ခုရှိတယ် -- အိမ်ထဲ မှာ ကြွက်ထောင်ချောက်တစ်ခုရှိတယ် !! ”
ကြွက်ဟာ နွားဆီကိုသွားပြန်တယ် ။ “ အိမ်ထဲမှာ ကြွက်ထောင်ချောက်တစ်ခုရှိတယ် -- အိမ်ထဲမှာ ကြွက်ထောင်ချောက် တစ်ခုရှိတယ် !! ” လို့ပြောလိုက်တယ် ။ အဲဒီအခါနွားက ပြန်ပြောတယ် ။ “စိတ် မကောင်းပါဘူး မောင်ကြွက်ရယ် ငါလည်းမင်းကို ဘာမှ လုပ်ပေးနိုင်တာမရှိပါဘူး ”
အဲဒီညမှာ အိမ်ကြီးဆီကနေ အသံတစ်ခုကို ကြားလိုက်ရတယ် ။ ကြွက်ထောင်ချောက်မှာ သတ္တ၀ါ တစ်ကောင်ကောင် မိနေတဲ့ အသံလိုမျိုးပေါ့ ။ ဒါနဲံ လယ်သမားရဲ့ဇနီးက ဘာအကောင်မိနေသလဲဆိုတာ သိဖို့ အမှောင်ထဲကို ပြေးထွက်သွားခဲ့တယ် ။ အမှောင်ထဲမှာတော့ -- အဆိပ်ရှိတဲ့မြွေတစ်ကောင်ရဲ့အမြှီးက ကြွက်ထောင်ချောက် ထဲ ညှပ်မိနေတယ်ဆိုတာ လယ်သမားရဲ့ဇနီးက မသိရှာခဲ့ဘူး ။ ဒါနဲ့ မြွေက လယ်သ မားရဲ့ ဇနီးကိုကိုက်လိုက်ပါတယ် ။
ဒီလိုနဲ့ လယ်သမားလည်း ပြာယာခတ်သွားပြီး သူ့ဇနီးကိုဆေးရုံကိုပို့ခဲ့တယ် ။ ဆေးရုံကနေ နည်းနည်း သက် သာလာပေမယ့် အဖျားက မပျောက်သေးပဲ ဆရာဝန်က စောင့်ကြည့်ဖို့ပြောတယ် ။
ဖျားနာနေတဲ့လူမမာအတွက် အကောင်းဆုံးက ကြက်စွပ်ပြုတ်ဟင်းရည်ဆိုတာ လူတိုင်းသိကြပါတယ် ။ လယ်သ မားဟာ ပုဆိန်ကိုယူပြီး သူ့ဇနီးအတွက် လိုအပ်တဲ့ကြက်စွပ်ပြုတ်လုပ်ပေးဖို့ ခြံဝင်းထဲဆင်းသွားခဲ့တယ် ။ ကြက်ဖ ကို သတ်ပြီး ကြက်စွပ်ပြုတ်အဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့တယ် ။
ဒါပေမယ့် လယ်သမားရဲ့ဇနီးဟာ အဖျားကနေမသက်သာလာပါဘူး ပိုပိုဆိုးလာခဲ့တယ် ။ သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့အိမ်နီး နားချင်းတွေက သတင်းလာမေးကြပြီး လူမမာမေးမှာ ထိုင်နေကြတယ် ။ သူတို့ကို ဧည့်ခံဖို့ လယ် သမားဟာ ၀က်ကိုသတ်ပြီးချက်ကျွေးခဲ့တယ် ။
လယ်သမားဇနီးဟာ ပြန်ကောင်းမလာခဲ့ပါဘူး ဒီလိုနဲ့ သူမ သေဆုံးသွားတယ် ။ နာရေးကို လူတွေလူတွေ အများကြီး လာကြတယ် ။ သူတို့အတွက်လုံလောက်တဲ့အသားကိုရရှိဖို့အတွက် လယ်သမားဟာ နွားကို သတ်ပြီး အမဲသားဟင်းကျွေးခဲ့တယ် ။
ကြွက်ဟာ နံရံ အကွဲကြောင်းထဲကနေ အဲဒီအဖြစ်အပျက်ကို မြင်ပြီး အလွန်ကို ၀မ်းနည်းစိတ်ထိခိုက်နေခဲ့ရတယ် ။
ဒါကြောင့် သင်နောက်တစ်ခါ ပြဿနာတစ်ခု ကိုကြုံပြီဆိုရင် သင်တစ်ယောက် တည်းနဲ့ဆိုင်တယ်မ ဟုတ်ဘူး ဆိုတာ သိထားပါ ။ မှတ်ထားဖို့က ကျွန်တော်တို့ထဲက တစ်ယောက်ယောက် ကြောက်နေပြီဆိုရင် ကျွန်တော် တို့အားလုံးလည်း အန္တရာယ်ရှိပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဘ၀ လို့ခေါ်တဲ့ ခရီးရှည်ကြီးထဲမှာ အတူတူ ပါဝင်ပတ် သတ်နေကြတဲ့သူတွေပါ ။
- တခြားတစ်ယောက်ဘာဖြစ်နေသလဲဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ မျက်စိဖွင့်နားစွင့်နေဖို့လိုပါတယ်
-တခြားတစ်ယောက်ဒုက္ခရောက်နေတာကို ကူညီဖို့ လိုပါတယ်
- စိတ်သာသာရာရအောင် အားပေးဖို့လိုပါတယ်
- ကျွန်တော်တို့ထဲက တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ အသက်ကြိုးတွေဟာ တခြားလူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ မမြင်ရတဲ့ ကြိုးတွေနဲ့ ဆက်နွယ် ချည်နှောင်လို့ထားကြပါတယ် ။
The mouse trap အားဘာသာပြန်ခံစားသည် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 5:05 PM
Yin Sue March 3, 2012 at 5:35 PM
ဖတ်သွားတယ်အစ်ကိုရေ...ပေးသွားတဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျလေးက သိပ်မတွေးဘူးတဲ့အကြောင်းလေးပါ..ကျေးဇူးပါ
မေ March 3, 2012 at 6:57 PM
ဖြိုးဇာနည် March 4, 2012 at 5:01 PM
ဖြိုးဇာနည် March 4, 2012 at 5:02 PM